Vaovao - Amboary ny làlan-tsolika mankany Ptfe | BESTEFLON
PTFE Tube miaraka amin'ny Layer Cover
Tube fika ifanarahana PTFE
Amboary ny làlan-tsolika mankany Ptfe | BESTEFLON
Araka ny karazany isan-karazany ny famahanana fiara dia azo zaraina amin'ny fantsom-panafody hydraulic, fantsom-piterahana pneumatika ary fantsom-bovoka. Araka ny fitaovana ao aminy dia mizara ho fantson-tsiranoka vita amin'ny fingotra, fantsom-paty nilona ary fantsom-bozaka PTFE
Ny fantsom-paratra vita amin'ny kodiarana dia manana tombony amin'ny tanjaka matanjaka mahery sy fametrahana mora, fa ny fatiantoka dia mora mihantitra ny etona aorian'ny fampiasana maharitra
Amin'ny tranga maripana ambany dia hihalefaka ny tanjaka mihosin-tsiranoka misy nylon, raha voan'ny hery ivelany dia mora tapaka
Saingy ny fantsom-pifandraisana PTFE dia manana fanoherana ny hafanana avo, ny mari-pana ambany, ny fanoherana ny tsindry mafy, ny fanoherana, ny fanoherana ny harafesina ary ny toetra hafa, ny androm-piainana maharitra, dia tsy mila fanoloana matetika. Afaka manonitra ny lesoka amin'ireo fitaovana roa hafa izy
Ny fiarovana, ny faharetana ary ny fahombiazanao no tokony hataonao loha laharam-pahamehana. E85 na etanol dia voaporofo ho solika ara-toekarena sy mahomby izay afaka manome ny isa oktane ilaina sy ny mety ho herin'ny fangatahana fangatahana. Fa ny additives amin'ny solika maoderina dia afaka manamafy sy manimba ny ankamaroan'ny fitaovana. Izany dia mety hiteraka fivoahana mety hampidi-doza ary mety hamela fofona ratsy. Raha vantany vao miharatsy ny tsipika solika, dia mety handoto sy hanentsina ny fantsom-panafody solika sy fantsona karburetor ny sombin-tsolika mahantra, misy vokany eo amin'ny zava-bita ary miteraka olana
Ny vahaolana tsara indrindra dia fitaovana polytetrafluoroethylene (PTFE). PTFE dia fitaovana plastika iray izay fantsona solika manify indrindra sy maivana indrindra misy. Izy io dia manambatra vy elastika avo lenta 304 vita amin'ny vy tsy misy fangarony amin'ny fantsom-bozaka PTFE ao anaty mba hampitombo ny fikorianany, ary ny fanamboarana ivelany sarotra dia manome malefaka tsy mampino. Ny fantsona PTFE ao anatiny dia mety ampiasaina amin'ny solika rehetra ary mahazaka ny mari-pana hatramin'ny 260 degre Celsius. Tsy voakasiky ny fahasimban'ny solika ny fitaovana, ka tsy mivoaka ny etona solika
Torohevitra ankapobeny ho an'ny rafitra solika:
Rehefa mametraka a Fantsona PTFE amin'ny fiara, tazomy ho lavitra ny loharanom-pahavaratra, ny sisiny maranitra ary ny faritra mihetsiketsika. Avelao hatrany ny fahazoan-dàlana ampy ho an'ny fivezivezen'ny rafitra herinaratra. Zahao ny fahazoan-dàlana eo anelanelan'ny fampiatoana sy ny singa fitaterana. Aza hadino ny mijery ireo singa fampiatoana mandritra ny fizotrany mba hisorohana ny fametahana na fanitarana ny fantson-tsolika. Ho an'ny fantson-tsolika mora tohina amin'ny fako eny an-dàlana sy ny hafanana avo dia ampiasao ny fantsom-panafody PTFE nasiana vy vy na tariby mafy. Aza hadino ny mametaka mafy ny fantsona mba hisorohana ny fikororohana. Ny Jig koa dia manampy amin'ny fampihenana ny fihoaran'ny singa hafa. Mampiasà fantsom-pifanarahana mety rehefa hose amin'ny alàlan'ny takelaka
Mety tianao ihany koa
PTFE hosotra milahatra
Fotoana fandefasana: Sep-17-2021
Ny fampahalalana farany sy ny fironana farany an'ny orinasa misy anay sy ny fahalalan'ny indostria mifandraika amin'ny PTFE Hose.
Ny tsipika solika PTFE dia manontany tena hoe inona ny marika sy ...
Tsipika mafy vy na kalitaon'ny solika PTFE ...
Telefaona: 0086 752 7778 829
Adiresy: Faritra indostrialy Sijiaolou, Boluo, Huizhou, Guangdong, Sina
© Zon'ny mpamorona - 2020-2022: Voaaro ny zonao rehetra. Vokatra mafana - Sitemap
pose fehiloha ptfe, Tolom-panafihana Ptfe Tube - 939 / 939b, 6an Ptfe Tube Assembly, fantsona ptfe, fantsona mifono ptfe, Fivorian'ny fantsona PTFE,